नेपालमा धेरैमा देखिएको थायराइड रोग किन लाग्छ ? थाहा पाउनुस् यसका लक्षण ………. – Ramailo Sandesh
नेपालमा धेरैमा देखिएको थायराइड रोग किन लाग्छ ? थाहा पाउनुस् यसका लक्षण ……….
यसको कारण खाएको केही पनि खानेकुरा निल्न समस्या हुने गर्दछ । नेपालमा पनि थायराइडका बिरामी दिनानुदिन बढ्दो छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथितीका कारण थायराइड नभएका मानिसहरुलाई पनि थायराइड भएको भन्दै औषधी दिइने गरिन्छ ।
धेरैजसो अवस्थामा थायराइड नोड्युल सजिलै पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ । जबसम्म थायराइड सुन्निँदैन तबसम्म यसको लक्षण नै देखा पर्दैन । यसका लक्षण यस प्रकार छः
थायराइड नोड्युलका कारण
बिहेको केही घण्टा नबित्दै बेहुलाले गरे बेहुलीमाथि यस्तो हर्कत, बेहुलीले जेल हालिदिइन्